Umbono weeHops-Iindaba-i-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ixesha: 2020-10-20 I ngxelo: 58
Izinto ezine eziphambili zebhiya yimithombo, amanzi, igwele kunye nohops. Kwaye nangona abantu abaninzi bonwabile ziibhiya ezinobungozi, abaninzi banokungayiqondi ukuba yintoni kanye kanye le hop.
Iihops ziintyatyambo, okanye iikhowuni, zesityalo esibizwa ngokuba I-HMLS LPLS. Iihops zinceda ukugcina ubhiya uhlaziyekile, ixesha elide; ncedisa ibhiya ukugcina intloko yayo yamagwebu-eyona nto iphambili kwivumba levumba kunye nencasa; kwaye, kunjalo, yongeza "hoppy" ivumba, incasa, nobukrakra.
IiHops zezosapho lakwaCannabinaceae, okwenzeka ukuba zibandakanye neCannabis (hemp kunye nentsangu). Iihops zizityalo ezomeleleyo kwaye zikhuliswa kwihlabathi liphela.
Yonke ibhiya enye kwintengiso namhlanje iqulethe iihops. Ukuba abenzanga njalo, bebeya kuba "kukudakumba" okusisiseko ibhiya, endaweni yehops, esebenzisa amagqwirha-ukwenza isandi semithi efana ne-myrtle, yarrow, heather, okanye umjunipha.
I-Sidenote: ubukrakra bunokuvela nakwiziqhamo, imifuno, kunye nemifuno eyongezwe kwibhiya. Umzekelo: i-pith evela kwi-zest orange, iingcebiso ze-spruce, juniper, kunye nokunye.
Iihops zahlulwe zaziindidi ezimbini ngokubanzi: ukukrakra nevumba elibi. Iihops ezikrakra ziya kuba nee-alpha acid eziphezulu, zibenze babe noqoqosho ngakumbi ekukrukeleni ubhiya (isixa esincinci sihamba umgama omde). Iihops zamavumba ziya kuhlala zinamaoyile abaluleke ngakumbi. Zizo ezooyile zibaluleke kakhulu ezifaka igalelo kwinto abantu abayiqondayo ngokuba "lithemba." Sithetha ii-aroma ezinje nge-citrus, ipine, imango, i-resin, i-melon, kunye nokunye. Ngokudibanisa iihops kwangethuba kwinkqubo yokuphisa, zonke ii-oyile eziyimfuneko ziyaqina (zibilise kude), nokuba kubile okanye xa kubila. Yiyo loo nto ukuzongeza kamva kwinkqubo yokusela kuthanda ukwenza ivumba lebhiya libe "hoppier." Kwakhona, ukungazinzi sisizathu esinye sokuba kutheni ivumba kunye nencasa yeebhiya ezinqabileyo zingasukumi kunye nexesha. Uninzi lweevumba zokuya phambili kunye neencasa ziya kunyibilika, zishiye ibhiya eyahlukileyo kunaleyo ibenziwayo.
Ukufumana eminye imibuzo nceda unxibelelane jessie@nbcoff.com okanye uWhatsApp: 0086-13940040515
Previous: Uyikhuthaza njani iBhiya yobugcisa
Okulandelayo: Ungazikhetha njani izixhobo zoBugcisa beBugcisa